I-Huawei S6700 Series Ishintsha Abenzi | I-China Huawei S6700 Series Ishintsha Ifektri & Abahlinzeki
Ukushintshwa kochungechunge lwe-S6700 (S6700s) kungukushintsha kwebhokisi lesizukulwane esingu-10G. I-S6700 ingasebenza njengokungena kokungena esikhungweni sedatha ye-Inthanethi (i-IDC) noma iswishi eyinhloko kunethiwekhi ye-campus.
I-S6700 inokusebenza okuhola phambili embonini futhi ihlinzeka ngamachweba angama-24 noma ama-line-speed 10GE ajwayelekile. Ingasetshenziswa esikhungweni sedatha ukuhlinzeka ngokufinyelela kwe-10 Gbit / s kumaseva noma ukusebenza njengokushintsha okuyinhloko kunethiwekhi ye-campus ukuhlinzeka ukuhlanganiswa kwethrafikhi kwe-10 Gbit / s. Ngaphezu kwalokho, i-S6700 inikezela ngezinsizakalo ezahlukahlukene, izinqubomgomo eziphelele zokuphepha, nezici ezahlukahlukene ze-QoS ukusiza amakhasimende ukuthi akhe izikhungo zedatha ezilinganisekayo, ezilawulekayo, ezinokwethenjelwa neziphephile. I-S6700 itholakala ngamamodeli amabili: i-S6700-48-EI ne-S6700-24-EI.
Ukushintshwa okuhleliwe kwezimboni, ukusebenza okuphezulu kweHuawei S6720-EI kunikezela ngezinsizakalo ezibanzi, izinqubomgomo eziphelele zokulawulwa kwezokuphepha, nezici ezahlukahlukene zeQoS. I-S6720-EI ingasetshenziselwa ukufinyelela kweseva ezikhungweni zedatha noma njengokushintsha okuyisisekelo kwamanethiwekhi ekhampasi.
I-S6720-HI chungechunge eligcwele eligcwele lokushintshwa komzila kwe-10 GE yizishintshi ezingaguquki zokuqala ze-IDN ze-Huawei ezinikezela ngamachweba ayi-10 we-GE downlink namachweba we-uplink angama-40 GE / 100.
Ukushintshwa kochungechunge lwe-S6720-HI kunikela ngamakhono we-AC angokwemvelo futhi kungaphatha ama-1K APs. Banikezela ngomsebenzi wokuhamba mahhala ukuqinisekisa isipiliyoni somsebenzisi esingaguquguquki futhi i-VXLAN iyakwazi ukusebenzisa i-virtualization yenethiwekhi. Ukushintshwa kochungechunge lwe-S6720-HI futhi kunikela ngezindlela zokuphepha ezakhelwe ngaphakathi futhi kusekela ukutholwa kwezimoto okungajwayelekile, i-Encrypted Communications Analytics (ECA), nenkohliso yenethiwekhi ebanzi. I-S6720-HI ilungele amakhampasi amabhizinisi, abathwali, izikhungo zemfundo ephakeme nohulumeni.
IHuawei S6720-LI chungechunge isizukulwane esilandelayo esenziwe lula konke-10 GE ukushintshwa okungaguquki futhi kungasetshenziswa ekufinyeleleni okungu-10 kwe-GE kuma-network nakwisikhungo sedatha amanethiwekhi.
S6720-SI Series Multi GE Ishintsha
IHuawei S6720-SI uchungechunge lwesizukulwane esilandelayo seMulti GE amaswishi ahleliwe alungele ukufinyelela ngesivinini sedivayisi engenantambo, ukufinyelela kwe-10 GE yedatha yesikhungo sedatha, nokufinyelela kwenethiwekhi ye-campus / ukuhlangana.
I-Huawei CloudEngine S6730-S Series 10GE Switches
Ukunikezela ngamachweba we-10 GE downlink eceleni kwamachweba we-40 GE uplink, amaswishi ochungechunge weHuawei CloudEngine S6730-S aletha ukushesha okukhulu, ukufinyelela kwe-10 Gbit / s kumaseva aphezulu kakhulu. ICloudEngine S6730-S futhi isebenza njengoshintsho olungumgogodla noma lokuhlanganisa kumanethiwekhi ekampus, inikezela ngesilinganiso sama-40 Gbit / s.
Nge-Virtual Extensible Local Area Network (VXLAN) eyenziwe ngokubona, izinqubomgomo zokuphepha eziphelele, kanye nobubanzi bezici ze-Quality of Service (QoS), i-CloudEngine S6730-S isiza amabhizinisi ukuthi akhe amanethiwekhi wesikhungo namathafa esikhala, athembekile, futhi avikelekile.
I-Xfp Transceiver, I-Sfp C ++, IHuawei Qsfp +, Intengo ye-Huawei Olt, Optical Fibre Module, Transmitter Wangaphandle Transmitter,